🥇 ▷ Asalka dhawaaqa kaameradda iPhone-ka ayaa ku jira Canonkan 40 sano kahor ✅
Asalka dhawaaqa kaameradda iPhone-ka ayaa ku jira Canonkan 40 sano kahor
Maalinteenna maalin kasta waxaan u adeegsannaa waxyaabo fara badan oo maalinle ah oo aan waligeen isweydiin. Qaarkood waxay leeyihiin taariikh ka badan sidii aan u maleyneynay, xitaa kuwa dhawaanahan u dhawaa, sida iPhone-ka. Mid ka mid ah aaladda qalabkan ayaa taariikhdeedu dib u dhacday afartan sano waqtiga. Waxay ku saabsan tahay codku wuxuu sameeyaa marka aan sawir ku qaadanno iPhoneka, asalkeedu waa kamarad SLR kambuyuutar ah.
Canon AE-1 iyo asalka codka kaamirada iPhone
Ku ciyaarista clip ugu sareeya mid ayaa isla markaaba u aqoonsanaya codka uu iPhoneku sameeyo marka aad sawir qaadaysid. Xaqiiqdii, sawir qaadayaasha halyeeyada ugu badan waxay dhihi doonaan waa sanqadha ay kamarad analog ah sameyso. Gaar ahaan, waa codka ay soo saarto a Canon AE-1 Markaad sawir qaadaneysid.
Kaameeradan Jaban waxay sameysaa dhawaq ay sameysay isku dhaf aad u qalafsan oo dhaqdhaqaaqa gudaha ah. Waxay kujirtaa mooto koronto oo dhaqaajiso filim sawir qaadis ah, garsado kala duwan iyo xamuulka laftiisa. Canon wuxuu soo saaray Moodhidan muraayadaha isweydaarsiga ah laga soo bilaabo 1976 ilaa 1984.
Shaqaale Apple ka tirsan oo la yiraahdo Jim Reekes ayaa iibsaday kaamiradan sanadka ugu dambeeya machadka. Wuxuu u adeegsanayay tan iyo markaas kaameerad shaqsiyeed. Sanadkii 1988 wuxuu shaqo ka galay Apple isagoo Injineer Software ah halkaasoo 1990-kii wuxuu mas’uul ka ahaa dhawaqa. Markaas ayay ahayd inuu dheefshiido codka kaamiradiisa si uu ugu isticmaalo saameyn ahaan markii uu qaadayay shaashadda nidaamka 7.6, nidaamka hawlgalka ee kumbuyuutarrada Apple waqtigaas.
Codkani muddo badan ayuu socday, oo garaacay Mac OS X, OS X iyo hadda macOS. Sanadkii 2007 wuxuu ku booday iPhone, dhawaaq aan wali isbedelayn. IPad sidoo kale wuxuu leeyahay isaga ilaa 2010 oo xitaa Apple Watch ayaa qeyladaan sameeya markii aad qaadanaysid shaashadda.
Skeumorphism sidoo kale waxay ku jirtaa dhawaaqa
Qof in muddo ah isticmaalayay iPhone-ka ayaa ku xasuusan doona sheekadan inay tahay nooc ka mid ah qumbaha. The qalfoof teknolojiyadda waxay ujeedadeedu tahay inay ka dhigto aaladaha kuwo la heli karo iyadoo la mid ah isdhaafsigooda iyo waxyaabaha dhabta ah. Fikradda ayaa ah in haddii wax dhijital ah ay u ekaadaan shay kale oo aan u adeegsado maalin kasta, waxaan awood u leeyahay inaan ku adeegsado dadaal yar.
Arinta Apple, noocyo badan oo iOS ka hor ah oo aan arki karnay saameynta isbedelkan. Tusaale wuxuu ahaa kalandarka, kaas oo waxay umuuqataa mid dhab ah oo ay maqaarkiisa dusha kaga taallo iyo warqad warqad leh. Waxaa laga yaabaa in tusaalaha ugu caansan ee skeumorphism-ka yahay Xarunta Ciyaaraha, oo muujisay sariir cagaaran iyo geesaha la mid ah kuwa miiska kaararka.
Apple waxay ka takhalustay waxyaabo badan oo ka mid ah nidaamka hawlihiisa sanadkii 2013 iyadoo la siidaayay macruufka 7. Iyo sanadka soo socda, OS X Yosemite qaadan lahaa naqshadeynta ugu wanaagsan ee macruufka 7 ee u dhaqaaqay Mac. In kasta oo wixii intaa ka dambeeyay Apple ay ka tagtay qayb badan oo ka mid ah skeumorphism-ka, waxaa wali jira “wali” oo aan ka heli karno nidaamyadeeda hawlgalka. Mid ka mid ah oo aad u badan tahay inaad si joogto ah u isticmaasho waa asalka waraaqaha ku yaal app Notes.
Shaki la’aan, dhawaaqa ay aalado sameyaan Apple Marka sawir qaadid ama qabasho, waa nooc kale oo skeumorphism ah. Mid ka mid ah sidoo kale ayaa wali la isticmaalaa maanta, maaddaama ay muujineyso dhawaaqa la soo saaray markii la helo farriinta iMessage taasna waxaa laga abuuray jaangooyada ‘Apple Watch of steel’.
Sawirada | Cburnett iyo Martintoy.
La wadaag Asalka dhawaqa kaamirada iPhone wuxuu ku yaal Canon this 40 sano kahor